Xaalada Deegaanadii Lagu dagaalamay Gobolka Mudug oo Maanta Degen – SBC
Xaalada Deegaanadii Lagu dagaalamay Gobolka Mudug oo Maanta Degen
Sida ay ku waramayaan wararka naga soo gaara deegaanka Dhagtuur ee gobolka Mudug xaalada deegaankaas ayaa ah maanta mid degen ka dib dagaal xoogan oo geystay khasaare uu halkaasi ku dhexmaray laba Maleeshoyo beeleed halkaasi wada dega.
Xaalada ayaa degen mana jiraan wax dagaal ah oo soconaya inkastoo mararka qaar laga maqlayo halka ay labada dhinac isku hor fadhiyaan xabado goos goos ah oo u eg kuwo cirka loo ridayo .
Dad ku dhaqan deegaanada lagu dagaalay deegaano ka ag dhow ayaa SBC u sheegay in dareenka xiisada colaadeed ay siweyn u taagantahay, islamarkaana ay jiraan dhaq dhaqaaqyo ciidan oo ay labada dhinac wadaan,
Waxaa kale oo ay dadkaasi sheegeen in ay deegaanada ka fog fog goobaha lagu dagaalamayo ku qul qulayaan dad ka barakacay dagaaladaasi dadkaas oo u badan caruur haween iyo Dad da’a ah.
Marka laga yimaado xaalada goobaha lagu dagaalamay oo degen ayaa hadana waxa bar bar soconaya dadaalada loogu jiyo sida colaadaasi loo soo afjari lahaa oo badigood ka soconaya magaalooyinka waaweyn ee labada Maamul goboleed waa Ximin iyo xeeg iyo Galmudug.
Magaalada Gaalkacyo waxaa ku sugan gudiyo kala duwan oo ku jira dadaalada dejinta xaaladan colaadeed, waxaana ay isugu jiraan gudiyadaasi kuwo ka socda DKMG ah, kuwo ka kala socda labada Maamul iyo Waxgarad iyo weliba odayaal dhaqameed.
Dhan walba hajirtee lama garanayo Xalka rasmiga ah ee laga gaarayo Dagaalo beeleedkaan Mudo badan soo noq noqday, hase ahaatee waxaa la filan karaa in markale dagaal halkaasi uu ka qarxo maadaama ay labada maleyshiyo isku muuqdaan, Rasaasna hawada iskugu ridayaan.